Mareykanka oo war kasoo saaray rabshadihii Muqdisho, jeediyey hanjabaad culus - Caasimada Online
Home Warar Mareykanka oo war kasoo saaray rabshadihii Muqdisho, jeediyey hanjabaad culus
Mareykanka oo war kasoo saaray rabshadihii Muqdisho, jeediyey hanjabaad culus
Washington (Caasimada Online) – Wasaaradda Arrimaha Dibedda Mareykanka ayaa sheegtay inay uu aad uga walaacsan tahay rabshadihii magaalada Muqdisho ka dhacay Axaddii ee u dhaxeeyey ciidamada dowladda iyo ilaalada qaar ka mid ah musharaxiinta, oo ay wehliyaan ciidamo diidan muddo kororsiga.
“Waxaan ugu baaqeynaa dhammaan dhinacyada inay muujiyaan is-xakameyn, si ay khilaafyadooda ugu xalliyaan si nabdoon,” ayaa lagu yiri war-saxaafadeed kasoo baxay wasaaradda.
“Wada-hadallo iyo heshiis ayaa ah hababka kaliya ee lagu xaliyo is-mari waaga siyaasadeed, waxaan ku boorineynaa dhinacyada inay dib u billaabaan wada-xaajoodyada mar un, si ay u gaaraan heshiis horey loogu ambaqaado doorashooyin deg deg ah.”
“Sida uu horey u sheegay xoghayaha arrimaha dibedda, dowladda Mareykanka waxay diyaar u tahay inay ka fakarto dhammaan agabyada la heli karo, oo ay ku jiraan cunaqabateyno iyo xayiraado dhanka visa-ha ah, si looga jawaabo dadaallada lagu waxyeeleynayo nabadda iyo xasilloonida Soomaaliya.”
Hanjabaadda ay ku celisay dowladda Mareykanka ayaa u muuqata inay mar kale ku socoto madaxda dowladda federaalka, maadaama hanjabaddii hore ee soo baxday 14-kii April ay si toos ah ugu socotay madaxda dowladda, kana dhalatay muddo kororsiga.
Qoraalkaas ayaa lagu yiri “Waxaan sidoo kale caddeynay in Mareykanka uusan taageeri doonin muddo kororsi aan haysan taageerada saamileyda siyaasadda Soomaaliya, iyo hanaan doorasho oo hal dhinac ah iyo kuwa is-dhinac socda.”